Amanyathelo ama-4 okuba yi-Clickbank ye-Micro-Enterprise yoShishino
Njengeshishini elinamashishini amancinci, unokufumana ingeniso ethe kratya ngentengiso ehambelana nayo. I-Clickbank yindawo efanelekileyo kuyo nayiphi na intengiso eqala ukubambisana, kuba indawo yayo yokuthengisa ehambelana nayo yeyona inkulu kwaye iphumelele.
Ukuba ulilungu leClickbank wannabe, ukuba yinxalenye yale nethiwekhi akunzima. Ukuqala ukuthengisa ngokubambisana kwi-Clickbank, ungalandela la manyathelo mane.
Cwangcisa iakhawunti yokunxibelelana neClubbank
Ukutyikitya njengendibaniselwano kulula. Isuka e ekhaya iphepha, cofa indawo ethi Sayina, ekusalela kwiphepha apho ufaka khona ulwazi oluqhelekileyo (igama, i-imeyile, idilesi yemeyile, njalo njalo). Ubhaliso lwe-akhawunti lusimahla. Emva koko unokukhetha isiteketiso, esisebenza njenge-ID yomsebenzisi weakhawunti.
Kwimeko apho uvelisa umvuzo we-600 yeedola okanye nangaphezulu, uya kucelwa inombolo yakho yoKhuseleko lweNtlalo ukuba wenza ishishini njengomntu okanye inombolo yakho ye-ID yetax (ukuba kwenziwe intlawulo kwishishini lakho). Emva kokuba ubhalisile, indawo izakuthumela nge-imeyile i-ID yakho yomsebenzisi (igama lesiqhulo) kunye negama lokugqitha elineenombolo ezisibhozo.
Njengoko uvelisa iikhomishini, isiza sikuthumelela iitsheki zakho zokuqala. Unokukhetha ukuba iintlawulo zingeniswe ngombane kwiakhawunti yakho yebhanki. Inxalenye yesizathu sokuba iitsheki zokuqala zithunyelwe kuwe ngeenkonzo zeposi eziqhelekileyo zezokhuseleko: Isiza sinokuqinisekisa ukuba idilesi yakho iyinyani.
Unokuseta ngaphezulu kweakhawunti ye-Clickbank ukuba uthatha isigqibo sokukhuthaza iimveliso ezininzi kwaye ufuna ukulandelela ukusebenza kwakho kunye nenzuzo.
ingqolowa iphezulu kwi-potassium
Fumana imveliso oza kuyithengisa njengendibaniselwano
Ukusuka kwiphepha lasekhaya, cofa kwindawo yentengiso. Yenza igama eliphambili lokukhangela iimveliso ezikwi-niche yakho oyikhethileyo. Qiniseka ukuba imveliso ikwizinto ezikhethekileyo kwaye zilungile kwintengiso ekujolise kuyo.
Nangona awudingi ukuthenga imveliso ukuqala ukuyazisa, inokuba licebo elilungileyo ukuze ube nokukhululeka kwimveliso nakumthengisi.
Nantsi eminye imibuzo onokuzibuza yona xa ucinga ngemveliso onokuyazisa:
Yintoni ubunzima bemveliso? Umxhuzulane ukunika ukuthengisa imveliso kunye nokuthandwa. Inokukuxelela ukuba ukhuphiswano lukhona kangakanani nabanye abanokuthi babhengeze imveliso.
Ubunzima be-100 okanye nangaphezulu kuthetha ukuba baninzi abantu okhuphisana nabo kwaye kusenokuxinana kakhulu ukuba ufumane isabelo sakho sentengiso. Umxhuzulane ongaphantsi kwama-40 unokubonisa ukuba imveliso intsha kakhulu (ayifundiswanga?) Okanye ayithandwa.
Ngaba imveliso ifumana uphononongo olulungileyo kwi-Intanethi? Beka igama lemveliso kwinjini yokukhangela kwaye ujonge iziphumo. Gauge ukuba abathengi kunye nabanxulumene ngokubanzi bonwabile ngemveliso. Chonga naziphi na izikhalazo.
Zithini izibalo zeClickbank malunga nale mveliso? Xa ujonga imveliso, i-Clickbank ibonelela ngolwazi oluphambili malunga nayo kunye neziphumo eziveliswayo. Unokufumana iimethrikhi, ezinje ngexabiso lekhomishini ngentengiso nganye, ukubona ukuba kunokuba luncedo kangakanani kuwe kwaye ubone ukuba ikuluhlu kangakanani na imveliso ngokweentengiso zizonke, kudidi lwazo, njalo njalo.
I-Clickbank inikezela ngeevidiyo ezikunika ukhenketho ngazo zonke iindlela ezithi zilandelwe imveliso kunye nendlela ezilinganiswa ngayo iintengiso kunye neziphumo zekhomishini. Unokufunda kwakhona uphononongo lwemveliso kunye nezimvo kwiibhlog zeClickbank nakwiiforamu ezivela kumava endibaniselanayo neemveliso ezahlukeneyo nabathengisi.
Loluphi uncedo lokuthengisa olubonelelwa ngumthengisi? Abanye babathengisi abaphumeleleyo banikezela ngesikhokelo esibanzi ukunceda amahlakani aphumelele. Ukuba ubona imveliso, yiya kwiwebhusayithi yomthengisi kwaye ubone iphepha labo lokudibana (ungafumana ikhonkco emazantsi okanye phezulu kwiphepha lasekhaya).
Funda ukuba umthengisi unikezela njani ngengcebiso kunye nezixhobo zokuthengisa, ezinje ngesampulu yamaphepha okufika kunye nekopi yokuthengisa onokuyikopa ngokukhululekileyo kwaye uyibandakanye kwii-imeyile nakwezinye iindawo (ezinje ngewebhusayithi kunye neebhlog). Izixhobo ezingakumbi kunye nezikhokelo ezibonelelwa lilungu, kungcono kuwe.
Fumana i-hoplink yakho yokudibana
Emva kokuba uthathe isigqibo ngemveliso, cofa iqhosha elithi `` Yazisa ''. Kwiwindow elandelayo, ufake igama lakho lomnxeba kunye ne-ID yokulandelela. Le ntsimi ayinyanzelekanga, kodwa kulungile ukuyisebenzisa.
Isazisi sokulandela umkhondo sigcina uhlaziywa malunga nendlela elenza ngayo iphulo lokuthengisa. Umzekelo, ukuba uphakamisa imveliso yeClickbank efanayo kwibhlog yakho nakwiphulo elahlukileyo le-imeyile, unokwenza i-ID yokulandela umkhondo yebhlog (njenge-myblog) kunye nenye yephulo le-imeyile (njenge-imeyile). Ngale ndlela unokulandela umkhondo wendlela nganye kwaye ubone ukuba yeyiphi na eneziphumo zentengiso ezingcono.
Xa ugqibile ukufaka igama lakho lesidlaliso kunye nekhowudi yokulandela ngokuzithandela, i-Clickbank iya kwenza kwangoko i-hoplink, eyikhonkco elahlukileyo onokulisebenzisa kwimizamo yakho yokuthengisa. Xa nabani na ecofa kule hoplink, u-Clickbank uyilandelela kwaye akubonelele ngetyala elipheleleyo kuyo nayiphi na intengiso eyenzekayo.
Unokubeka i-hoplink ngokulula njengoko unokubeka nayiphi na enye ikhonkco. Unokubeka ii-hoplinks kwiwebhusayithi, i-imeyile, ibhlog, iphepha le-Facebook, okanye inqaku.
Bhatalelwa nayiphi na intengiso yokuhambelana
I-Clickbank ilandelela ukuthengisa kunye nayo nayiphi na ikhomishini eveliswe yimigudu yakho yokwazisa. Ungangena kwaye ujonge iakhawunti yakho kunye neziphumo ozivelisileyo. Ukuba unayo nayiphi na ikhomishini, i-Clickbank ihlala ikhupha intlawulo qho kwiiveki ezimbini zokudibana.
Okwangoku ungathatha isigqibo sokuba yeyiphi enye into ofuna ukuyenza. Ungaqhubeka nokukhuthaza imveliso oyikhethileyo, okanye unokufumana ezinye iimveliso kunye nabathengisi. Amanyeneyo amaninzi athanda ukukhuthaza iimveliso ezininzi kwi-niche efanayo ukuphucula amathuba okuthengisa.
Ngaba intsini iyaphula ngokukhawuleza
zithini iziphumo ebezingalindelekanga ze-meclizine
I-polyethylene glycol 3350 kunye ne-electrolyte
kutheni ndilambe kangaka mva nje
indlela yokunyamekela iirose ezincinci
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-rogaine kwabasetyhini
uyisebenzisa njani i-twitter